Maalinta Haweenka Aduunka oo laga xusay Magaalada Bosaaso | maakhir.com
Maalinta Haweenka Aduunka oo laga xusay Magaalada Bosaaso
Bosaaso:- Madaxwaynaha Maamulka Puntland Cade Muuse Xirsi ayaa maanta ka qayb galay Xuska Maalinta Haweenka ee ku beegnady 8- Maariso, kulankaasi oo ka dhacay Xarunta dawlada Hoose ee Magaalada Bosaaso,waxana goob joog ka ahaa dad badan oo ay midyihiin Wasiiro,wasiiro xigeeno,iyo Ururada Bulshada iyo waliba kooxda Fanaaniinta walaaha Gobolka Bari.
Munaasabadan aadka loo soo aggaasimay waxaa soo abaabulay wasaarada Haweenka DGPL Ururka ka shaqeeya danaha haweenka ee waawa, Urur isna lagu magaacaabo Benderqaasim oo kamid ah Ururada Haweenka ee ka jira Puntland waxaa madaxweynaha ka qeyb galkiisa munaasabadan ku waheliyey wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga iyo arimaha bulshada Cali Cabdi Awaare wasiirka macdanta iyo badroolka Xasan Aloore la taliyaha Madaxweynaha dhinaca arimaha bulshada Barkhad Cali Saalax.
Ugu horayn waxa Kulankaasi ka hadlay Madaxwayne Cade Muuse oo shaaca ka qaaday inay muhiim tahay in maalinta Haweenka aad loo oogo oo laga soo qayb galo, Cade Muuse waxa uu sidoo kale uu xusay inay aad u bahad sanyihiin dhamana dadkii soo qaban qaabiyay,isaga oo mahada gaar ah u soo jeediyay Shabakad Waawa oo uu ku til maamay inay qayb wayn ka qaatee wacyo galinta Bulshada.
Waxa iyana halkaasi ka hadashay Gudoomiyaha Ururka Waawo oo ah Urur u olaleeya arimaha Haweenka Xaawo Cali Jaamac oo iyadu daboolka ka qaaday inay xafladaasi isku soo duba rideen,waxay sheegtay Xaawo Cali Jaamac inay raga wax badan ka fiican yihiin oo ay qabtaa Hawlo badan oo wax ku ool ah.
Munaasibadaasi ayaa ahayd mid si wayn looga soo qayb galay iyada oo dhamaan Laga xusay Gobolada kale ee Maamulka Puntland,waxana halkaasi Gabayo iyo Heeso ka soo jeediyay Kooxda Fanaaniita walaaha Gobolka Bari.
« Uganda ayaa walaac ka muujisay sii joogitaanka Ciidamadeed ee Gudaha Dalka Somaliya
Ceelkii Biyaha ee Degamada Xingalool ayaa maanta Dibu habayn lagu wadaa »